မနောဖြူလေးပေါက်သွားပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မနောဖြူလေးပေါက်သွားပြီ
Posted by htet way on Sep 2, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 24 comments
တနေ့သား၌ကျွန်ပ် ဆီသို့ ဖုန်းဝင်လာ၏။ ဆရာထက်လား ဟူ၍မေးပြီး အေးဗျာ မနောဖြူလေး ဆောင်းပါးကတော်တော်ကောင်းတယ် ရွေးလိုက်ပြီ ဟူ၏။ သို့ကလို ပြောသူကား မန္တလေး အလင်းက CEOဦးတင်ကိုအောင်ဖြစ်ပါလေ၏။ မနောဖြူလေး၏ မြန်မာပြည်ကို ချစ်သည်ဆောင်းပါး(၃၁.၈.၂၀၁၂)ထုတ်မန္တလေး အလင်းဂျာနယ်တွင် ပါလာလေသောအခါ ကျွန်ပ်အား “ မိတ်ဆွေ ထက်ဝေးရေ့ အသင်တို့ ဂျာနယ်က မနောဖြူလေးဆိုသည်ကား အဘယ်သူနည်း ပိန်ပိန်သေးသေး ဖြူဖြူဖွေးဖွေးမျက်မှန်နဲ့ ဟို ..လေဒီလေးလားကွဲ့ ဟု ပုသိမ်က သတင်းစာဆရာတစ်ယောက်က ဤသို့မေးလာလေသော် ကျွန်ပ်က အဆွေတော် ဂေဇက်ဝင်တွေက ပြောင်းပြန်နာမည်မှည့်တတ်
လေသည်။ပမာဆိုသော် ဦးဦးပါလေရာဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား နာမည်က ပါလေရာဆိုသော်လည်း ဥပဓိရုပ်မြင်ရုံနှင့် ကြည်ညိုလောက်ပေသည် အဆွေတော် ။နေရာတကာပါဖို့ဝေးစွ တွေ့ချင်လျှင်တောင် မနည်းတောင်ပန် ဖုန်းဆက် မေတ္တာရပ်ခံရ သည်။ စာအရေးအသားကို ကြည့်လျှင် အနှီပုဂ္ဂုလ်၏ အရည် အချင်းကို
အသင်သိသာနိုင်သည်ဟု ပြန်ဖြေရသည် ။အနှီမနောဖြူလေးဆိုသော အမျိုးသမီး သည်ကား ၀တုတ် ဖက်တီး အစားကြီးသူပါတကား။သို့သော် သူ့အမည်နာမကား မနောဖြူလေးဟူ၏။သို့သော် မနောမဖြူ ရန်ကုန်ရောက်စဉ် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းမပေး ကြုံကြိုက်တုန်း လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက် တစ်ဖလား သောက်သွားစေချင်သော စေတနာမရှိ။အဘဖေါ ၏ ဆန်းမားပဲလေ့ ဒါနပြု မိတ်ဆုံပွဲတွင် သင်းကား တ၀တပြဲ အ၀ဆွဲသည်ကို မြင်ခဲ့ရလေသည်။
တလောက ဂေဇက် စ၀င်သော မန္တလေးက သမီးပျိုလေးတစ်ယောက်က ဘဘဆရာထက် ဘလက်ချောဆိုသော အကိုတော် အကြောင်း သိရင်ပြောစမ်းပ ဟု ဆိုလာချေသော် ဘလက်ချောဆိုသူကား မျက်မှန် နှင့် ပြဇာတ်မင်းသားပုံ ဖမ်းထားသူ လူချောတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ၊ စာရေးကောင်းရုံမက သီချင်းပါဆိုကောင်းကြောင်း သို့သော် အဆိုပါ ဘလက်ချောသည် ပြောင်းပြန် နာမည်မှည့် ပုံက သူ့နှလုံးသားသည် မမည်း ဆွတ်ဆွတ်ဖြူ သည်ကို ကျွှန်ပ်က သက်သေပြ ဖို့ သူ့၏ချိုပေါ့ကျကို မျက်ရည်မကျပဲ ညွှန်းလိုက်ရသည်က တစ်ကြောင်း။
ဤသို့ သို့ဂလို မမ၊ Etone ဆူး၊ မောင်ပေ၊ ဖက်တီးကက်၊ ကိုရင်စည်သူ၊ ကမ်းဝေး ၊.ချာတူးးလန်(အမာခံနာမည်တွေကျန်ပါသေးသည်)..အစ၇ှိသော ဂေဇက် ၀င် အမာခံများက နာမည်ကို ပြောင်းပြန် မှည့်ကြလေရာ မနောဖြူလေးသည်လည်းနာမည်ကို ပြောင်းပြန်ပြန် မှည့်ခဲ့လေသည်တည့်.အကျွှန်ပ်ဆရာကြီး
ထက်ဝေးမှာလည်း ဂေဇက် ၀င် မမာတမာဖြစ်ရချေရာ အပြင်၌ အလွန်တုံးအလွန်ညံ့လေရာ ပြောင်းပြန် ထက်မြက်သူဟု မှည့်ခေါ်စေရာ၏။ ဝေးဆိုသည်ကား သိုးဆောင်းတို့၏ဘာသာစကား WAY ကိုယူ၍ ထက်မြက်သော လမ်းကြောင်းပေါ်၌ လျှောက်နေသူဟု အနက်ဖွင့် ခဲ့လေသည်က တမှုံ့။
အနို့လို သို့လို ဂေဇက် ၀င် အကြောင်းရှင်းလင်းပြီးသကာလ မနောဖြူလေးအကြောင်းကို ဆက်ရလေသော် Satire စတိုင်ယာခေါ်သရော်စာကိုရေးသော မြန်မာပြည်ကို ချစ်သည်ဟူသောစာက ဂျာနယ်တွင်ပါလာသော် မိတ်ဆွေရဲသား တစ်ယောက်က ဆရာထက်ရေ့ ခင်ဗျား ဂေဇက်က လက်စွမ်း ထက်ပုံက ကျုပ်တို့ကို တောင်းစားတာနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းလိုက်ပါရောလား သင်းမနောဖြူ လုပ်ထည့်လိုက်ပုံကမလွယ်လှချေတကားဟူ၍ ညည်းတွား သလို ပြောလာချေ၏။ တဖန် မြောင်းမြက
မိတ်ဆွေ စာရေးဆရာ ကား ဂေဇက် ကို ဖတ်သူဖြစ်ရတကား မနောဖြူ လုပ်ချက် သိပ်မိုက်တယ် ဆရာ ဆက်ရေးစေဖို့ ဆော်သြစေလိုကြောင်း ဖုန်းဆက်လို့ အားပေးလေပါ၏။
ဂေဇက် အင်းအားကို ပန်းတနော်အလှူ ရခိုင်သွေးချင်းများလက်ဆောင် စသည် ဧရာဝတီ ဂျာနယ် မန္တလေး အလင်းဂျာနယ် တို့တွင်ပါဝင်လေခဲ့ရာ ဂေဇက် ၀င်တို့၏ဓါတ်ပုံက အထင်းသား ရှိချေရာ လူရှိန်ခဲ့ရလေရာ ယာဉ်ထိန်း၇ဲ တစ်သိုက်က အဆိုပါဂျာနယ်အဟောင်းများကို အလုအယှက်လိုက်ပါရှာ နေသည်ဟုသတင်းရလေ၏။ စည်ပင်ဈေးတာဝန်ရှိသူတစ်ချို့က လည်း ပန်းတနော်အလှူသတင်းဓါတ်ပုံပါသော ဂျာနယ်ကို လိုက်လံရှာဖွေနေသည် ကြားရလေရာ အဘယ်ကြောင့် ရှာရလေသနည်းဟု မိတ်ဆွေ တို့ မစဉ်းစားကြပါလေနှင့် မနောဖြူလေးပပုံပါသည်ဟူ၍ ကျွှန်ပ်က အာချောင်ထား၍ ဖြစ်ပါချေသည်တကား။
မှတ်ချက်။ ။ ပေါက်သည် ဟူသောဝေါဟာရသည် စာပေလောက၌ ကျော်ကြားခြင်း ရောင်းအားကောင်းသောစာအုပ်ဖြစ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည် တလွဲမတွေးကြရန်။
တလွှဲတွေ လျောက်တွေးနေဒါ ..
ထီများ ပေါက်သွားတာလားပေါ့ …
အင်း ထီပေါက် ရင် မာနကြီးပြီး အင်း တက်သွားနိုင်ပါတယ် ကိုယ့်ညီရယ်
မနောဖြူလေး က ICT ဂျာနယ်မှာလည်း ၊
အမြဲတမ်းလိုလို ပါနေတာနော် ။
စည်ပင် နှင့် ရဲတွေ ကပါ မနောဖြူလေးပုံကို ၊
လိုက်ရှာကြည့်နေရပြီ ဆိုပါလား ။
လူချစ် လူခင် များလာတဲ့ သဘောပေါ့ ။ ဟီ ဟိ ။
Celebrity ပေါ့ ။
နောက်ဆို မနောဖြူလေး ဘတ်စကားပေါ်တက်လာရင် ၊
ထိုင်ခုံနေရာတွေများ ဖယ်ပေးကြမလားမသိ ။
မနောဖြူလေး စိတ်ဆိုးနှင့်နော် ၊ နောက်ထှာ ။
စည်ပင်တွေရဲတွေ လိုက်ရှာနေတာကို ဓါတ်ပုံက ကျွန်တော်ဆီမှာရှိတယ်လေ
အဘဆီကပုံတော့ မပြ လိုက်နဲ့ အဲ့ဒီတုန်းက ပုံက အ၀လွန်နေတယ် အခု ပုံက ပိန်နေတယ်
မရေးတော့ လည်းမရေးလို့ 
ရေးတော့ လဲ သွားဖြဲပြီးဖတ်နေရပြီ
ဒီလတော့များများရေးဗျာ မျှော်နေမယ်
ဆရာဆာမိ လည်းရေးပါအုံး မေ၇းပေမယ့် အမြဲဖတ်နေပါတယ်
မနောဖြူလေးပေါက်သွားပြီတဲ့ သတင်းကတော့ ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ ကိုထက်ဝေးရေ။
ထီလာ ၂လုံးလား ၃လုံးလား လားပေါင်းများစွာနဲ့……
ထီလား ၂လုံးလား ၃လုံးလား လားပေါင်းများစွာနဲ့……
အဲလိုပေါက်သွားတာလား ဖတ်ကြည့်မှဘဲ ရှင်းတော့တယ်။
may flowers ma ma01306
ဆရာမတို့ အားပေးကြတာ ကျေးဇူးပါဗျာ
မနောဖြူလေး ပေါက်သွားပြီ ဆိုလို့
စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးတွေးမိပြီး မြန်မြန်ဖတ်လိုက်တာ
ကိုထက်ဝေးတို့ လုပ်ပေါက်ကတော့ —-
ပေါက်သွားတဲ့ အစ်မကြီး မနောဖြူအတွက်ကော
ပေါက်တာကို ဖော်ပြပေးတဲ့ ကိုကြီးထက်ဝေကော
ကိုရင်လည်း ပြန်လာရင် ကိုကြီးထက်ဝေတို့လို ပေါက်အောင်
၀င်ပွားရင် ပေါက်မှာတော့ မြင်ယောင်မိသေး…
ခေါင်းပြောတာ.. ခေါင်းပေါက်မှာ.. အဟီးးး
ကျုပ်တို့ဂဇက်ထဲမှာ ဒီလိုစာရေးဆရာ စာရေးဆရာမတွေရှိနေတာလဲ ဂုဏ်ယူစရာပါ ကိုထက်ဝေးရေ..။
ဘလက်ချောဆိုသော အကိုတော် အကြောင်း သိရင်ပြောစမ်းပ ဟု ဆိုလာချေသော် ဘလက်ချောဆိုသူကား မျက်မှန် နှင့် ပြဇာတ်မင်းသားပုံ ဖမ်းထားသူ လူချောတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ၊ စာရေးကောင်းရုံမက သီချင်းပါဆိုကောင်းကြောင်း သို့သော် အဆိုပါ ဘလက်ချောသည် ပြောင်းပြန် နာမည်မှည့် ပုံက သူ့နှလုံးသားသည် မမည်း ဆွတ်ဆွတ်ဖြူ သည်ကို…..
တဲ့ ………….. အဟိ ။ တင်စားချက်ကလေး..လှ ပုံ…များပြောပါတယ် ။
နီချင်နီ မနီချင်နေ အပျိုဂျီးက ပေါက်သွားပြီတဲ့ ….အာဟုဟိ
ဘဘဦးကိုထက်ဝေး ဘယ်မှာပေါက်တာလဲ ကြီးကြီးအန်တီမနောဖြူလေးက ဟိုတခါ ရေးတဲ့ အထူးကား ကြီးထဲမှာလား…..
နောက်တခါ ပေါက်မယ်ဆိုရင်လဲ အခုလိုပဲ ကြိုပြောပါနော်…….
အမှန်တော့ မနောဖြူက ပေါက်တာမဟုတ်မှာပါဘူး။ ဆရာထက်ရေ..
အားလုံးအမြင်မမှားအောင် ဒီနေရာကနေ ပြောလိုက်မယ်နော်။
ဆရာထက်ပြောသလိုပေါ့… နာမည်က အရင်ထဲက ကြွေးကြော်ပြီးသားလေ ပေးထားတဲ့နာမည်နဲ့လူက ဆန့်ကျင့်ဘက်မို့လို့ ဒီနာမည်ကို ရွေးချယ်ထားတာပါလို့… နောက်ပြီး
ဖုန်းနံပါတ်မပေးရတဲ့အကြောင်းကလည်း ၅ ထောင်တန်ဖိုးကိုစောင့်နေတာမို့ လောလောဆယ် ပေးစရာနံပါတ်မရှိသေးပါကြောင်း…
ကော်ဖီကတော့ ကိုယ်တိုင်မတိုက်နိုင်သရွေ့ သူများတိုက်တာ လိုက်သောက်ရတာ အားနာပါကြောင်း…
အဘဖော ပွဲမှာ အ၀အပြဲတီးရခြင်းအကြောင်းကတော့ အဘဖောက အ၀မှာထိုင်စားလို့ရတယ်။ ပါဆယ်တော့ ထုတ်ခွင့်မပေးဘူးပြောလို့ လုပ်ဆောင်ရပါကြောင်း….
အဟဲ..မွန်မွန်လည်း ပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ ပ နဲ့ ဂ က ဒီနေရာမှာ အဓိပ္ပါယ်တူတော့ ငါ့ယောင်းမ (အဲ တော်ချင်တာတွေ ပေါ်ကုန်ပြီ) ငါ့ချစ်မ ကို ဘူ ဘာပြောတာလဲဆိုပြီး ၀င်ဖတ်တော့မှ…အော်… ဂလိုဂိုး…
လောကဂျီးမှာ ရဲနဲ့သရဲ ပေါ်တင် မဆဲရဘူးကွဲ့…မကျေနပ်ရင် လက်သီးပုန်းထိုး..ဒင်းတို့မှာ ဝေမ္မာနိက ပြိတ္တာအစွမ်းတန်ခိုးတွေ ရှိတတ်တယ်..။ အခုမှတော့ မထူးဘူး..ပေါက်လက်စနဲ့ တိုးလျှိုးပေါက်အောင်သာ ဆက်ထိုးပေတော့… မနောဖြူလေးကို ထိရင် လုံးဝ မခံဘူးကွ…။
ဘယ်ခံမလဲ… ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ခံလို့ ပြောတာမလား… ဦးကြောင်နော်..
မနောဖြူ တစ်ယောက် အနှီသို့ တုန့်ပြန် ပြီးသကာ
ကျွှန်ပ် ဆြာထက် မလည်း ကိုယ်ဇာတ် ကိုယ်ထိန်းရန်အတွက် …
“ဆရာမ ရေ အကျွှန်ပ် က ဟာသလေးရေးမိတာပါပ နောက်ပြီးစည်ပင်နဲ့ ၊ရဲတွေ လည်း သတိထားမိအောင်..အဲလေယောင်လို့ ဆရာမ စာကို ချီးမြှောက်တာပါကွယ်